သန်းဝင်းလှိုင် ရေး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း - (၁၉၁၅ - ၁၉၄၇) « Colorful People of Burma / Myanmar
သန်းဝင်းလှိုင် ရေး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း - (၁၉၁၅ - ၁၉၄၇)
(မိုးမခ) မေ ၁၀၊ ၂၀၁၁။
ဤဖြစ်ရပ်မတိုင်မီ တက္ကသိုလ်သမဂ္ဂဥက္ကဌကိုနုအား အမျိုးသားနေ့ မိန့်ခွန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ၁၉၃၆ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ကျောင်းမှ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရသည်။ ဤသို့ သမဂ္ဂနှင့် အိုးဝေမဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာကို ကျောင်းမှ ထုတ်ပစ်လိုက်ခြင်းသည် ကျောင်းသားထုတစ်ရပ်လုံးကိုစော်ကားခြင်းဟု သမဂ္ဂကယူဆသည။် ထို့ကြောင့် ၁၉၃၆ ခု၊ ဖေဖော်ဝါရီလ၂၅ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် ကျောင်းသားသပိတ်ကို သမဂ္ဂက ဦးဆောင် ၍ ကျောင်းသားများ တညီတညွတ်တည်း ဆင်နွှဲခဲ့ကြသည်။ သပိတ်တိုက်ပွဲပြီးသောအခါ တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင် များက ကိုအောင်ဆန်းကို ကျေင်းပြန်နေခွင့်ပေးရသည်။ ကိုအောင်ဆန်းသည် ၁၉၃၆-၃၇ တွင် ဘီအေစီနီယာ တန်းကို ပြန်တက်ရာ ပဲခူးဆောင် အခန်းအမှတ် ၁၁၃ တွင် ဆက်လက်နေထိုင်သည်။ ထိုနှစ်တွင် ပဲခူးဆောင် သဟာယအသင်းတွင် အောင်ဆန်းသည် အမှုဆောင်အဖြစ် ပြိုင်ဘက်မရှိ အရွေးခံရသည်။ ယင်းနောက် ပဲခူး သဟာယအသင်းနှင့် စာဖတ်အသင်းတို့တွင် ကိုအောင်ဆန်းသည် ဥက္ကဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ထို့ပြင် ၁၉၃၆-၃၇ တက္ကသိုလ်သမဂ္ဂတွင် ကိုအောင်ဆန်းသည် ဒုတိယဥက္ကဌအဖြစ် အရွေးခံရသည်။ ၁၉၃၇ တွင် ကိုအောင်ဆန်းသည် အင်္ဂလိပ် စာပေ၊ ဥရောပ ရာဇ၀င်၊ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဘာသာရပ်များဖြင့် ၀ိဇ္ဇာတန်းကို ခုံအမှတ် ၅၆ ဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ကိုအောင်ဆန်းသည် ထိုနှစ် မေလ ၉ မှ ၁၀ ရက်နေ့အထိ မန္တလေးမြို့တွင်ကျင်း ပသော ဒုတိယအကြိမ် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံသို့တက်ရောက်ပြီး မိန့်ခွန်းပြောကြားသည်။
ထိုနှစ်ဧပြီလ ၆ ရက်နေ့မှ ၉ ရက်နေ့အထိကျင်းပသော တို့ဗမာအစည်းအရုံးမော်လမြိုင်ညီလာခံတွင် အခမ်းအ နားမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၁၉၃၉၊ ဧပြီ ၃၀ မှ မေလ ၅ ရက်နေ့အထိကျင်းပသော တို့ဗမာ အစည်းအရုံး၏ဌာနချုပ် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့အစည်းအဝေးတွင် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ရွေးကောက်ခံရသည်။
သို့နှင့် ၁၉၄၀၊ ဇွန် ၁၇ တွင် ဟသာင်္တခရိုင်၊ ဇလွန်မြို့တွင်ကျင်းပသော တို့ဗမာအစည်းအရုံးတရားပွဲတခုတွင် သခင်အောင်ဆန်းသည် ချင်းတောင်တန်းအကြောင်း ဟောပြောသောကြောင့် သခင်အောင်ဆန်းနှင့် ကျုံမငေး သခင်တင်မောင်တို့အား ကာကွယ်ရေးဥပဒေနှင့်ဖမ်းဆီးရန် ဟသာင်္တရာဇ၀တ်ဝန် မစ္စတာဇေဗီးယား (Mr.Xavier) က ၀ရမ်းထုတ်လိုက်သည်။ ကံအားလျော်စွာ ဗမာပလိပ်အရာရှိတဦး၏ အကူအညီဖြင့် ဟသာင်္တ ခရိုင်မှ လွတ်မြောက်ကာ ရန်ကုန်မြို့တွင်းတွင် ပုန်းလျှိုးနိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအတောအတွင်း နယ်ချဲ့အစိုးရ၏အ လိုတော် ရိ ဖေဗီးယားကပင် ‘‘သခင်အောင်ဆန်းအား ဖမ်းဆီးပေးနိုင်လျှင် ဆုငွေ ၅ ကျပ်ပေးမည်” ဟု ကြေ ညာလိုက်သည်။ ယင်းဆုငွေ ၅ ကျပ် ထုတ်ပြန်သည့် သတင်းကို ဇူလိုင်လ ၂ ရက်နေ့ထုတ် သတင်းစာများတွင် အသီးသီးပါရှိလာရာ သခင်အောင်ဆန်းကိုသာမက မြန်မာတမျိုးသားလုံးကိုပင် စော်ကားလိုက်သောကြောင့် တစ်ပြည်လုံးကရှုံ့ချခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ယင်းဆုငွေကို ၁၉၄၀၊ သြဂုတ် ၂၀ တွင် ပြန်လည်ရုပ်သိမ်း ပေးခဲ့ရ သည်။
သခင်အောင်ဆန်းသည် ဗြိတိသျှအစိုးရ၏ အဖမ်းမခံလိုပဲ ပြည်ပတွင်ထွက်ပြီး နိုင်ငံခြားအကူအညီရှာရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါ တီနှင့်ဆက်သွယ်ရန် သခင်အောင်ဆန်းသည် တန်လွန်ရှောင်ဟူသော တရုတ်အမည်ခံယူပြီးလည်းကောင်း၊ သခင်လှမြိုင်သည် တန်ဆူတောင်ဟူသော တရုတ်အမည်ခံယူပြီး လည်းေ ကာင်း ၁၉၄၀၊ သြဂုတ် ၈ ရက်နေ့တွင် နော်ဝေးပိုင် ‘‘ဟိုင်လီ” (Hai Lee) သဘောင်္ဖြင့်ရန်ကုန်မှထွက်ခွာလာခဲ့ရာ ၁၉၄၀၊ သြဂုတ် ၂၄ တွင် အမွိုင်ရှိ ကူလန်စုကျွန်း (Kulangsu Island) သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သခင်အောင်ဆန်း တို့သည် အမွိုင်မြို့တွင် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့်အဆက်အသွယ်မရပဲသောင်တင်နေစဉ် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရဲဘော် များ၏ကြိုးပမ်းချက်အရ ဂျပန်နှင့်ဆက်သွယ်မိခဲ့သည်။
ဖဆပလ၏တောင်းဆိုချက်ကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် အင်္ဂလိပ်နန်းရင်းဝန်မစ္စတာ အက်တလီ (C.R.Attlee, P.C. ., O.M.., C..H..) က ၁၉၄၆၊ ဒီဇင်ဘာ၂၀ တွင်ဗြိတိသျှပါလီမန်အောက်လွှတ်တော်တွင် မြန်မာကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ကို အင်္ဂလန်ပြည်၊ လန်ဒန်မြို့သို့ဖိတ်ခေါ်ဆွေး နွေးမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှအစိုးရ၏ဖိတ်ကြားချက် အရ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဦးဆောင်သည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် အင်္ဂလန်ပြည်သို့သွားရောက်ပြီး ဗြိတိ သျှအစိုးရကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကာ ၁၉၄၇၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၇ တွင် ‘‘အောင်ဆန်း-အက် တလီစာ ချုပ်”ကို ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။
ထို့နောက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ပြည်မနှင့်တောင်တန်းဒေသများအပါအ၀င် ပေါင်းစည်းပြီး မြန်မာ့လွပ် လပ်ရေးရယူနိုင်ရန် ၁၉၄၇၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ တွင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ တောင်ပိုင်းနှင့်အရှေ့ပိုင်းတို့၏ လမ်းဆုံရာ လဲချားစော်ဘွား၏ နယ်မြေအတွင်းရှိ ပင်လုံမြို့ ကလေးတွင် တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ် ၂၃ ဦးတို့နှင့်အတူ သမိုင်းဝင် ‘‘ပင်လုံစာချုပ်” ကို ချုပ်ဆိုခဲ့ပေသည်။ ၁၉၄၇၊ ဧပြီ ၉ တွင် ကျင်းပသောတိုင်းပြည်ပြု လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဖဆပလအမတ်လောင်းအဖြစ် ရန်ကုန်မြို့မ (လမ်းမတော်) မဲဆန္ဒနယ်မြေမှ ၀င် ရောက်အ ရွေးခံပြီး လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ် ပြိုင်ဘက်မရှိရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရသည်။
So, what do we mean 바카라사이트 by “casinos in the UK”? 바카라 사이트 to https://deccasino.com/review/merit-casino/ findacasino and live casino games onagri-go.com mobile phone device sol.edu.kg in 2021.